Nhau - Bato rebato reXiamen NEWYEA Boka rakakunda zita rekukudza reAdvanced Grassroots Party Organisation muSiming District.
Bato rebato reXiamen NEWYEA Boka rakakunda zita rekukudza reAdvanced Grassroots Party Organisation muSiming District.
[Nhau Dzakanaka] Bato rebato reXiamen NEWYEA Boka rakakunda zita rekuremekedza reAdvanced Grassroots Party Organisation muSiming District.
Kuti vapemberere makore zana ekugadzwa kweCommunist Party yeChina, pazuva raChikunguru 1, Xiamen akaita musangano wekurumbidza "vaviri vakanaka uye wekutanga", vachirumbidza zvikuru Xiamen nhengo dzakasarudzika dzeCommunist Party, vashandi vezvematongerwo enyika vakatanhamara uye epamberi mapato mapato.
Xiamen NEWYEA boka co., LTD. Dare rebazi, rakahwinawo zita rekuremekedza repamberi rehuswa-midzi bato sangano reXiamen City mumusangano wekurumbidza uyu.
Kubva pakagadzwa Bato rebato mu2017, Xiamen NEWYEA Boka rakazvipira kuvaka "Exhibition NEWYEA" Bato rekuvaka mhando, inogara inotevedzera kutungamira kwePati, uye inogara ichikurudzira kubatanidzwa kwakadzika kweParty kuvaka nekuvandudza bhizinesi. Nechivako chemhando yepamusoro, inopa vimbiso yakasimba yezvematongerwo enyika kumabhizimusi ekutungamira mafambiro mumakwikwi anotyisa emusika.
Ino nguva, kuitira kusangana nezana ramakore rebato. Bato rebato reNewYEA Boka harina kungoronga nhengo dzePati kuti vatarise pamusangano musangano vachipemberera makore zana ekuberekwa kweCommunist Party yeChina. Ivo vakashandisawo zvavo zviito zvinoshanda kupemberera zuva rekuzvarwa kwepati.
Iko kukudzwa hakusi chete kusimbiswa kwebato rebato rebato reNewYEA Boka, asiwo kurudziro yekusimudzira kuvakwa kwebazi. Tichatorawo izvi sepokutangira, kuzadzisa nguva nyowani yezvido zvekuvaka bato uye nhambo nyowani yemutsetse wesangano rebato, kusimudzira kuziva kwe "vana", "vana" kuvimba "," maviri ekuchengetedza ", kutamba nani Vanguard muenzaniso wakanaka wenhengo yemakomunisiti, enderera mumunda wekuchaja zvisina waya kuti ukunde zvakaoma, kupayona uye hunyanzvi, kubatsira nyika kuti iwane "kabhoni yepamusoro", "kaboni isina kwayakarerekera" chinangwa nekuedza.
Nezuro ndiko kuvambwa kwemutambo wepati, kambani yedu yakahwinawo Siming Dunhu repamberi pazuva iri